China XB-009 Gril's Bicycle, N'ihu nkata azụ Carrier, ndị na-emepụta kaadị wheel na ndị na-ebubata ya | Xuxiang
XB-009 Gril's Bicycle, N'ihu nkata azụ Carrier, kaadị wheel
Mbụ:12 14 16 18 inch nwa ịnyịnya ígwè nwere wheel ọzụzụ, 20 inch nwere kickstand.
XB-009 etiti High carbon ígwè ịgbado ọkụ etiti. Ihe mkpuchi aka na-adịghị amị amị na nke na-adịgide adịgide, saddles na-eku ume na nke na-agaghị eyi, taya gbasapụrụ agbachapụ, na agba gburugburu gburugburu iji chebe uto dị mma nke ụmụ ọhụrụ! Ịgba ịnyịnya ígwè ndị mara mma na-eme ka ụmụaka nwee mmasị ịnya ịnyịnya na egwuregwu!
XB-009 dị fechaa ma na-adịgide adịgide. N'ihu na azụ V-brek maka nchekwa agbakwunyere na ọnọdụ ihu igwe niile. Ogwe aka na-agbanwe agbanwe na ịdị elu oche maka ụmụaka na-eto eto. ejiji mudguard na-eme ka ụmụaka nwee igwe kwụ otu ebe pụrụ iche ma dị jụụ!
XB-009 na-eji maka etiti carbon ígwè dị elu, mkpuchi mkpuchi mkpuchi, breeki V, mkpuchi yinye zuru oke, crank ígwè, wiil ọzụzụ PVA, okwu 10g mara mma, oche dị elu, nkata plastik n'ihu, taya 2.125, eserese mara mma na mpụta ihe mmado. ..
agba Red, Pink, ma ọ bụ dị ka mkpa gị
Frame Eku ịgbado ọkụ carbon ígwè dị elu
Aka mmanya Cove aka mmanya na gburugburu ebe obibi enyi na enyi ihe
Jide Enyi na gburugburu ebe obibi
breeki n'ihu V-brek
breeki azụ V-brek
brek lever BMX, L/R plastik
Rim Ígwè / Ígwè
Taya 2.125 Taya
mkpuchi mkpuchi mkpuchi yinye zuru oke
Okwa oche W/ akara ntinye nchekwa, nke ejiri ụfụfụ PE kechie
Ntọhapụ ngwa ngwa Igwe igwe
Sadulu Sadụl enwere ike ibugharị
Pedal W/ ndị na-atụgharị uche nwere bọọlụ
Wheel ọzụzụ Ụkwụ ígwè & plastic ọzụzụ taya
ngwugwu 100% CKD, 50% SKD, 85% SKD, Igbe A/B; 1PC/CARTON, 2PCS/CARTON, 4PCS/Katọn ma ọ bụ dị ka achọrọ
1. Ajụjụ: Enwere m ike ịnweta nlele?
A: A na-asọpụrụ anyị ịnye gị ihe nlele ọhụrụ maka nlele mma.
2. Q: Ogologo oge ole ka ị na-eme ihe nlele ọhụrụ?
A: Iji mee ka a ọhụrụ sample banyere 5-7 ụbọchị, dị iche iche nlereanya na dị iche iche oge.
3. Q: Gịnị bụ oge nnyefe nke sample?
A: Ọ na-ewekarị ihe dị ka ụbọchị 4-5 site na China gaa obodo gị site na DHL.
4. Ajụjụ: Enwere m ike ịgwakọta ụdị dị iche iche n'otu akpa?A: Ee, ụdị dị iche iche nwere ike ịgwakọta n'otu akpa, ma ọnụ ọgụgụ nke
ụdị ọ bụla ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị MOQ. Nakwa agwakọta agba na otu ihe nlereanya .
5. Q: Kedu ka ụlọ ọrụ gị si eme gbasara njikwa mma?
A: Anyị nwere àgwà gosipụtara, dị ka CE, EN, ISO .Ịdị mma bụ ihe kacha mkpa. Ndị mmadụ na-etinyekarị mkpa dị ukwuu na njikwa mma site na mmalite ruo na njedebe nke mmepụta. Ngwaahịa ọ bụla ga-agbakọta na
nwalere nke ọma tupu ebufee ya.
6. Ajụjụ: Gịnị bụ akwụkwọ ikike gị?A: Anyị na-enye akwụkwọ ikike dị iche iche maka ngwaahịa dị iche iche.
Biko kpọtụrụ anyị maka usoro akwụkwọ ikike zuru ezu.
7. Ajụjụ: Ị ga-ebufe ngwongwo ziri ezi dịka iwu nyere? Kedu ka m ga-esi tụkwasị gị obi?
A: Ee, anyị ga-eme. Isi nke omenala ụlọ ọrụ anyị bụ ịkwụwa aka ọtọ na kredit bụ onye na-eweta ọla edo nke alibaba maka afọ 5. Ọ bụrụ na ị lelee alibaba, ị ga-ahụ na anyị enwetabeghị mkpesa ọ bụla n'aka ndị ahịa anyị.
8. Ajụjụ: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ ị nwere ike ịnakwere?
A: Dị ka ọ dị na mbụ ugwo anyị bụ 30% T / T, itule megide oyiri nke B / L.
Nke gara aga: XB-010/ Onye na-emepụta ihe na-ere ụmụaka igwe kwụ otu ebe
Osote: XB-008 / igwe kwụ otu ebe maka ụmụaka na-emepụta okirikiri okirikiri / haziri igwe ụmụaka
XB-027, 12 14 16 18 20 inch nwa ịnyịnya ígwè
2020 ewu ewu ụmụaka ịnyịnya ígwè / China Factory ho ...
XB-004, Pink Grils igwe kwụ otu ebe, wiil abụọ nwere nkata,...
XB-028, Fornt Basket Rear Tools Igbe na akpa sa...
Bike Baby / 2 wiil igwe kwụ otu ebe / OEM% ODM Factory / Chi ...
OEM na-ekpo ọkụ ire ọhụrụ igwe kwụ otu ebe / kacha mma ụmụaka anyịnya igwe ...